Ambatondrazaka : vita ny 67%-n’ny lalana ao an-tampon-tanàna | NewsMada
Tafiditra ao anatin’ny faritra iasan’ny Tetikasa Ambatovy ny any Alaotra Mangoro. Niantohany ny fanarenana ny lalana ao an-tampon-tanàn’ Ambatondrazaka, renivohitry ny faritra, toy ny fanamboarany fotodrafitrasa maro any amin’ireo tanàn-dehibe hafa (Toamasina, Moramanga, Brickaville, sns).
Nahatratra 70.000 ora ny fotoana niasana tany an-toerana, ka tsy nahitana loza mihitsy, na iray aza teo am-panaovana ny asa, vita hatrany amin’ny 67%. Nomena mari-pankasitrahana ireo mpiasa 88 ny 18 avrily teo tao amin’ny kianja Stand central Ambatondrazaka. Natao izany mba hanarahana ny politikan’Ambatovy amin’ny aroloza sy ny fahasalamana, araka ny tanjona “tsy misy loza mihitsy”.
25 tapitrisa dolara ho an’ny sosialy sy fotodrafitrasa
Tsiahivina fa nanokana 25 tapitrisa dolara ny Tetikasa Ambatovy, ao anatin’ilay tahirim-bola ho an’ny tetikasa sosialy sy ny fotodrafitrasa. Natokana hamatsiam-bola ireo tetikasa sosialy sy fotodrafitrasa ao anatin’ny faritra iasany. Ifanarahana amin’ny tompon’andraikitry ny faritra sy ny governemanta ny fisafidiana ny tetikasa hovatsina vola.
Ankoatra izany, naherin’ny 10.000 ny mpitsidika ny varavarana misokatra, andiany fahefatra natao teo amin’ny tokotany malalaky ny lapan’ny Tanàna any Toamasina. Mifanaraka amin’ny fametrahana ny mangarahara sy finiavana mizara vaovao ny antony.